Australia Oo Wax Ka Badal Ku Samaysay Xeerasha Qaadashada Jinsiyadeeda Iyo Qaabilaada Soo Galootiga – Heemaal News Network
HomeWararka Af SoomaligaCaalamkaAustralia Oo Wax Ka Badal Ku Samaysay Xeerasha Qaadashada Jinsiyadeeda Iyo Qaabilaada Soo Galootiga
Australia Oo Wax Ka Badal Ku Samaysay Xeerasha Qaadashada Jinsiyadeeda Iyo Qaabilaada Soo Galootiga
Dawladda Australia ayaa sii adkaynaysa habka lagu helo dhalashadeeda iyada oo isabadal wayn ku samaynaysa sida ay ula macaamisho dadka soo galootiga ah.
Dadka raba in ay qaataan dhalasho ayaa maridoona imtixaanno ay ka mid yihiin luuqadda Ingiriiska iyo awoodda ay u leeyihiin in ay ku dhaqmaan “qiyamka Australia” sida uu sheegay ra’iisalwasaare Malcolm Turnbull.
Dadka soo gudbisanaya codsiyada muwaadinnimada ayaa iyagana looga baahan yahay in ay si joogta ah u daganaayeen dalka muddo afar sano ah, arrintaas oo saddex sano ka badan wakhtiga hadda looga baahan yahay.
Arrintan ayaa imanaysa maalmo uun ka dib markii ay Australia soo bandhigtay shuruudo adag oo lagu xirayo shaqaalaha xirfadleyaasha ah ee laga keensado adduunka dacaladiisa.
Ra’iisalwasaare Turnbull ayaa sheegay in isbadalladani ay xaqiijin doonaan in dadka soogalootiga ah ay si fiican u dhexgalaan bulshada.
“Waa muhiim in ay fahmaan in ay la imanayaan ka go’naansho ku aadan ilaalinta qiyamka Australia” ayuu yiri.
Ra’iisalwasaare Turnbull oo sharaxaya “Qiyamka Australia” ayaa sheegay in ay waajib tahay in soo galootigu ay taageeraan xoriyadda diinta iyo sinaanta jinsiga ama ragga iyo dumarka.
“Xushmaynta dumarka iyo carruurta, kuwaasi waa furaha qiyamka Australia”, ayuu yiri isaga oo sii raaciyay in aan loo dulqaadan doonin shaqaaqadaha guryaha dhexdooda ka dhaca.
Waxyaabaha kale ee looga baahan yahay qofka dhalasho dalbanaya waxaa ka mid ah:
⦁ Imtixaanno dheeri ah oo luuqadda Ingiriiska ah, kuwaas oo kala ah akhrinta, qoraalka, dhagaysiga iyo ku hadalka.
⦁ Caddaymo la xiriira in qofku uu ku milmay bulshada, taas oo ay ka mid yihiin in uu soo shaqeeyay, iskuul soo dhigtay, ama uu xubin ka yahay ururrada bulshada.
⦁ In uu si rasmi ah u sii daganaa ugu yaraan afar sano.
⦁ Dadka soo dalbanaya jinsiyadda saddex jeer oo kali ah ayay codsiga soo gudbisan karaan, qofkii isku daya in uu khayaano sameeyana isla markaasba waxaa la go’aamin doonaa in dhacay oo uu san u qalmin in la siiyo dhalashada dalka.
Australia	English News	Syria conflict: US jet ‘downs Iranian-made drone	English News	Shabaab details last week’s deadly assault in northern Somalia	English News	Somali survivors tell of bloody restaurant siege by rebels	English News	Hargeisa To Join Air Arabia’s African Network	English News	FACT FILE: Climate change, food security, and adaptation	English News	‘There is no blockade… Qatar is free to go,’ says Saudi FM	English News	UAE expels Somali from Ramadan competition over Qatar row	English News	AFRICOM Imam Leads First Iftar Uith U.S., SNA Leaders	English News	Landlocked Ethiopia Eyes Role in DP World-Managed Somali Port	English News	Somalia’s president vows revenge on al Shabaab after deadly attack	PreviousSomalia Oo Markii U Horaysay Mudo 30 Sano Ah Loo Ogolaaday Inay Martigaliso Ciyaaro Caalami Ah
NextPuntland Oo Deeq Gaadhsiisay Gobolada SSC Halka Somaliland-na U Hamuumayso In Ay Layso Oo Maydkoodu Bato
Caalamka	Australia Oo Hub Ka Dhigis Ku Samaynaysa Shacbkeega, Muddana U Qabatay In Lagu Soo Xereeyo	16th June 2017
Dawladda Australia ayaa markii u horaysay soo saartay cafis qaran oo dhanka hubka ah tan iyo sannadkii 1996dii, sababtuna waxay tahay halista argagixisada iyo hubka sharcidarrada ah ee ku sii qulqulaya dalkaas. Inta lagu gudo […]
Caalamka	Duufaan Xoog Leh Oo Ku Dhufaty Waqooyiga Bari Ee Qaaradda Australia	28th March 2017
Duufaan loogu magac daray Debbie ayaa ku dhufatay dhulka berriga ah ee waqooyiga bari ee Australia, ayadoo wadata roob iyo dabayl saacaddii ku socota ilaa 270 KM.
Caalamka	Xildhibaanad Ilamaheega Ku Dhex Nuujisay Xarun Baarlamaan Iyadoo Mooshin Ka Doodaysa	10th May 2017
Larissa Waters oo ah haweenay reer Australia ah ayaa noqotay siyaasiyaddii u horaysay ee ilmaheeeda naas ku dhex nuujisa baarlamaanka dalkaas.